Nzira yekuchengetedza sei gantry yekugaya muchina? - Dongguan Tuoyuan nemazvo Machinery Co. LTD.
Nzira yekuchengetedza sei gantry yekugaya muchina?
Iyo yakajairwa dziviriro yeiyo gantry yekugaya muchina yakakoshawo zvakanyanya. Matambudziko mazhinji akajairika anokonzerwa nekuregeredza dziviriro yakajairwa. Kana iko kushandiswa kweiyo gantry yekugaya muchina ikashandiswa zvinoenderana nesainzi yekushandisa gwara uye nemitemo yekudzivirira uye mirau, inogona kudzivirira vazhinji Mukukahadzika, kudzikisa kurasikirwa kwehupfumi.
Gantry hwokugaya hwakabvira muchina kubudiswa rudzi achitungamirira kugadzira michina dzakakwirira mwero kushandisa michina, zvinosvibisa mamiriro uye anodhura mutengo. Inoita basa risingaperi mukugadzirwa kwazvino kwemaindasitiri. Kuti upe mutambo uzere mukubudirira kweCCC gantry yekugaya muchina yekugadzirisa, inowanzo dzivirirwa uye kugadziriswa kwemuchina chishandiso chinofanirwa kuitwa. Izvo zvakakosha kuti udzikise hurema chiyero cheCCC gantry yekugaya muchina kugadzira
Urongwa hwese hweiyo gantry yekugaya muchina kugadzira inoumbwa neye gantry furemu. Iyo gantry furemu inoumbwa nekaviri makolamu, matanda, ekubatanidza matanda, epamusoro matanda, yepamusoro chifukidzo uye yekugaya misoro yemakondohwe kuti iite yakasimba kuomarara chimiro. Matanda anokwira nekudzika achitevedza njanji inotungamira njanji, uye danda rinotwasuka rakagadzirirwa pamatanda. Yakakwira-simba akawanda-mashandiro emakondohwe-mhando anofinha uye ekugaya musoro. Musoro unofinha uye wekugaya unofamba uchitevedza danda rinotungamira njanji uye unofamba uchikwira nekudzika. Iyo gantry mamiriro inofamba kwenguva refu ichitevedza mubhedha.
Paunenge uchishanda gantry yekugaya muchina, anoshanda anofanira kunzwisisa zviyero zvemuchina chishandiso chakashandiswa. Senge simba remuchina wekutyaira mota, huwandu hwesimbi yekumhanyisa, chiyero chekudya, sitiroko renji remuchina chishandiso, chinzvimbo chekutakura chebasa rinoshandiswa, hukuru hwechishandiso uye huwandu hwechishandiso chakabvumidzwa neATC. Izvo zvinodawo kuti unzwisise chinzvimbo cheyero yega yemafuta uye ndeipi mhando yemafuta akatsetseka anoshandiswa.
Uye zvakare, chengetedza nharaunda yakatenderedza muchina chishandiso chakachena, uye gantry yekugaya muchina inofanirwa kugara ichibvisa guruva kuitira kudzivirira iyo inotonhorera mweya nzira kubva mukusagadzikana, zvichikonzera tembiricha muCCC kabhodhi kuti ive yakanyanya uye iyo system haigone kushanda zvakajairika. Iwo mabhodhi edunhu nemagetsi emagetsi mune kabhodhi yemagetsi anofanirwa zvakare kuve guruva nguva dzose kuti ave nechokwadi cheakajairika mashandiro eiyo magetsi system.
Iyo yemberi kusimudzira maitiro eCCC gantry azvikuya